Gnome: ny dingana manaraka | Avy amin'ny Linux
Gnome: ny dingana manaraka
Toa ny ankizilahy GNOME Mihevitra izy ireo fa efa manana ny Desktop tonga lafatra na zavatra hafa satria ny tanjon'izy ireo manaraka dia ny miasa amin'ny fanatsarana ny famolavolana ny rindranasa.
Ny tanjonay dia ny hampandeha haingana sy tsy handany fotoana hahitan'ny olona votoaty ary te hanome fitaovana mahomby ho an'ny olona handamina izahay. Tianay koa ny mamorona fitaovana ho an'ny atiny izay mifanaraka amin'ireo mpampiasa ankehitriny, miaraka amin'ny zavatra toa ny fikarohana haingana sy ny fampidirana rahona.
Toy izao no mamaritra ny bebe kokoa ny tetika tokony harahina Allan Day ao amin'ny bilaoginy. Avelany ho hitantsika ao amin'ny lahatsoratra hoe ahoana ny sasany amin'ireo rindranasa be mpampiasa indrindra ao amin'ny GNOME, amin'ny alàlan'ireo sary zaraiko etsy ambany. Ireo asa rehetra ireo, hoy i Allan, dia manaraka ireto fitsipika fototra ireto:
Omeo fikarohana haingana sy mahomby.
Ampifanaraho amin'ny karazana atiny ny fomba fijery. Tsy voatery hitovy tanteraka amin'ny antontan-taratasiko ny mozika. Ohatra: azo hatsaraina ho an'ny atiny tsirairay.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra (misy ny maningana) ny filaharan'ny atiny dia mifanaraka amin'ny nampiasaina farany. Ankoatra ny zavatra hafa, ity dia manome fiasa mahasoa hitadidy ny atiny izay mety ho tianao.
Mampiasà fomba fijery misaraka amin'ny fitetezana sy ny fampisehoana. Mampiasa mahomby ny efijery efijery ary ahafahan'ny mpampiasa interface mifantoka amin'ilay lahasa eo am-pelatanana.
Midira mandeha ho azy amin'ny atiny izay voatahiry an-tserasera (amin'ny alàlan'ny kaonty GNOME Online). Ny iray amin'ireo tanjona ao ambadik'ireto fampiharana ireto dia ny tokony ahafahan'ny mpampiasa vaovao mampiditra ny antsipirian'ny kaontiny an-tserasera mandritra ny fametrahana azy eo am-boalohany, ary afaka mahazo ny atiny rehetra eo amin'ny rahona anao avy hatrany.
Ampianaro ny olona hanome marika na handamina ny atiny anao amin'ny tanana fa aza avela ho lasa teritery na mavesatra entana ny fikambanana.
Anisan'izany ny fampiasa izay mifandraika amin'ny karazana atiny. Te-hilalao mozika sy horonan-tsary ve ianao, hizara sary, hanonta antontan-taratasy sns?
Avelao ny mpampiasa hanokatra ny atiny amin'ny fampiharana manokana. Na dia manome fampiharana fototra aza ny rindranasa atiny, dia misy tranga maro izay misy olona te hampiasa fampiharana manokana hiara-miasa amin'izany atiny izany.
Ampidiro ny fikarohana ao anaty fampiharana ny famaritana ireo hetsika, mba hahafahan'ny fikarohana tokana miditra amin'ireo rindranasa atiny rehetra.
Ary izao no vokany:
Jereo ny lahatsoratra tany am-boalohany amin'ny teny anglisy raha mila fanazavana fanampiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Gnome: ny dingana manaraka
Gnome ihany no fantatro mandrakizay, KDE mbola tsy hitako. Mampiasa Xfce aho izao satria ubuntu 12.10 dia vakiana miaraka amina firaisan-kina. Misy ubuntu misy genome ve? Gubuntu? heh heh
Heveriko fa ny Ubuntu dia napetraka miaraka amin'ny firaisankina ary avy eo gnome ary manomboka eo na zavatra toy izany ... marina? Aleoko zavatra mivantana Gnome.
Salama! Heveriko fa izao no tadiavinao:
ostiss !! Misaotra betsaka Heraldo sy Fernando !!
Efa napetrako ao anaty ankafizin'ny rahona Chrome ary avy any an-trano no andalinako azy io hahitanao azy, hizaha Vbox voalohany izahay.
Hoy aho, sariaka be. !!
HERALD dia hoy izy:
Ubuntu GNOME Remix 12.10 -> https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGNOME/ReleaseNotes/12.10#Download
Valio amin'i HERALDO
Ny Remix izay nataon'izy ireo dia mametraka ny core Ubuntu ary Gnome novaina ho an'ny Ubuntu.
Raha mametraka Ubuntu mahazatra (na Lubuntu mihitsy aza) ianao ary te hametraka Gnome, dia tsy hitovy izany, dia ho hitanao ny mahasamihafa ny Remix amin'ny Gnome teratany sy ny "overlay", na dia manao installer net an'i Ubuntu aza ianao ary Avy eo apetrakao eo aminy ny Gnome, tsy dia tsara loatra izany.
Ary nolazaiko anao izany satria efa nanandrana an'izany xD rehetra izany aho
Tsara aiza no ahazoako azy amin'ny findaiko?.
Satria izay vao nasehonao dia tsy natao ho an'ny netbook akory?
Mitovy bebe kokoa amin'ny menio smartphone na finday.
Gnome Shell ny birao tonga lafatra?
Lazao ahy iray hafa izay mihomehy ahy haha ​​[/ mody simpsons simpson]
Ny Gnome Shell dia tena lavitra ny maha-birao tonga lafatra azy, ary koa, Gnome Shell dia lavitra be amin'ny birao.
Aiza ny fahasoavana? Toa tsy lavorary izany aminao, fa amiko kosa.
Raha ny marina, izany no tanjona, efa ela ny ekipan'ny Gnome no nanambara izany, nanomboka tamin'ny filazany fa "maty ny birao", hatrany amin'ny làlana nodiavin'izy ireo tamin'ny tetikasany.
Lavitra ny maha birao azy io, ary hihalavitra hatrany izany.
Toa tsara ho an'ny ultrabook mahafinaritra ahy ary koa ny takelaka misy ahy; mode ironika = off
P.S. Fanontaniana iray, izay ilay gnome default Banshee na Rhythmbox mpilalao. Azoko tsara fa tsy misy ifandraisany amin'ilay lahatsoratra izany. Fanontaniana iray fotsiny no ananako
Drakon dia hoy izy:
Rhythmbox no ofisialy sy toerana misy anao.
Valiny tamin'i Drakon
Ny Gnome sy ny akorany dia toa tsy birao "tonga lafatra" mihitsy. Tsy tiako mihitsy.
Eny ry Elav malalako, ny marina sy ny fahitsiana ny latabatra tonga lafatra dia tsy misy afa-tsy ho an'ilay olona mahafeno ny filanao sy mahatsiaro ho mahazo aina amin'izany. Ny DE rehetra toy ny KDE, XFCE, LXDE, Razor-QT ary GNOME, ary koa ny WMs toy ny openBOX dia azo ampiharina sy milamina ary raha toa ianao ka trondro anaty rano dia averiko indray fa io no birao tonga lafatra.
Ny KDE dia tsy mampino, azo ovaina ary tsara tarehy, saingy mijaly noho ny olan'ny fanjifana mitovy amin'ny Windows. Fantatro fa afaka manamboatra fanitsiana vitsivitsy ianao ary mahazo tontolo iainana tena tsara miaraka amin'ny fanjifana ambany ary raha izany no antenain'ny mpampiasa, dia mandeha ny marina.
Ny XFCE, LXDE ary Razor-QT dia azo lazaina fa ny "hazavana" tsy mitovy amin'ny mavesatra mavesatra na birao mahazatra. Tena azo namboarina sy azo namboarina izy ireo saingy mifototra amin'ny WM (afa-tsy XFCE mazava ho azy) dia misy fetrany. Ankehitriny XFCE sy LXDE dia sahirana amin'ny fifindra-monina mankany amin'ny GTK3 ary maro ny mpamorona mbola ao anaty limbo ary tsy dia vonona an'izany, tsy toa an'i Razor-QT satria mifototra amin'ny QT dia nanolo-tena ny lehilahy avy amin'ireto tranomboky ireto hamolavola ny rindranasao sy hitazona tontolo iainana ekena sy madio. Manantena aho fa ireo mpanamboatra fampiharana miorina amin'ny GTK, XFCE ary LXDE dia hanapa-kevitra ary handray ny dingana izay tsy maintsy hakan'izy ireo.
Ny GNOME dia be ny manohitra sy manohitra azy satria ny fiovana sasany dia tampoka loatra amin'ny maro. Ny tokony hodinihina dia ny mason-tsivana hiezahana hitantana tontolo iainana "mitovy" amin'ireo sehatra hafa toy ny finday avo lenta. Android sy webOS dia manana fitoviana mampieritreritra ny olona iray. Betsaka no hilaza fa tsy misy telefaona na takelaka misy GNOME fa kasaina ho amin'izany. Alao an-tsaina ny tombony anananao manana interface toa izany amin'ny biraonao, laptop, tablette ary telefaona; na ny miadana indrindra aza dia manana curve fianarana kely indrindra ary miaraka amin'ny tombony ahafantaran'izy ireo ny interface.
Ny mpikambana hafa ao amin'ny fiarahamonina ary izaho manokana dia nandefa lohahevitra mikasika ny fironana, tsy fantatro raha ho tanteraka ireo, saingy toa izany no fomba. Ny tontolo mihidy toa an'i Apple ary ankehitriny i Microsoft dia manandrana mampiditra desktops (mba hilazana azy) miaraka amina interface izay mitovy na mitovy amin'ny azo atao ary ny tanjon'izany dia ny manararaotra ny fisondrotana amin'ny fitaovana finday hahazoana ny lehibe indrindra azo atao tsena misy fihenam-bidy kely ianarana. Ny KDE dia mitohy amin'ny laharan'ny birao nentim-paharazana ary mandritra ny andiany 4.x dia hitohy toy izao. Izy io dia manana karazany hafa amin'ny netbook sy takelaka saingy mbola tsy nahavita namboarina ireo ary ho safidy matotra hodinihin'ireo mpanamboatra.
Ny ezaka nataon'ny Intel sy HP (raha tsy hiteny vitsivitsy) toy ny amin'ny webOS na Mozilla miaraka amin'ny rafitra fiasan'izy ireo sy ny Android etsy ankilany, manome toky fa hitovy na tsy ho ela ny interface. Na dia hitohy aza ny PC ary ho (raha ny hevitro manokana) no ivon'ny ecosystem, dia tsy maintsy hiova fanovana kely izy mba hifangaro tsara amin'ireo singa hafa amin'ny ekosistia ary amin'izao fotoana izao dia birao 1 ihany no nandray an'io lalana io.
Toy ny amin'ny zava-drehetra, tombantombana fotsiny izany ary fankasitrahana manokana, fa ny tena marina sy ny zava-misy dia ny fivezivezena Linux rehetra dia mivelona amin'ny fidiram-bola, na amin'ny fanomezana na satria manana maodelim-pandraharahana toa ny Cannonical, Novell, RedHat, sns. ka tsy maintsy raisin'izy ireo ny fironana amin'ny tsena. Ohatra, raha mandeha ianao ka mividy Scanner na fitaovana hafa dia mila manamarina ianao fa afaka mametraka azy tsy misy olana be dia be ao amin'ny distro misy anay ary indraindray tsy mety izany.
Mampalahelo fa ho an'ny sasany ary harena ho an'ny hafa, ny ankamaroan'ny mpampiasa solosaina (solosaina maso) dia somary neophyte ary tsy manana faniriana hianatra bebe kokoa noho izay manampy azy ireo hahazo asa. Etsy ankilany, raha mametraka finday isika dia hiova ny zavatra. Ary araka ny nolazain'i Cantinflas dia misy ny antsipiriany.
Misaotra tamin'ny famakafakana JorgeManjarrezLerma.
Ny latabatra Razor-QT no soratako hanadihadiana.
Tsy haiko raha toa izany foana, ary tsy tsapako izany. Saingy toa nibontsina be tato ho ato ny tontolon'ny linux tato ho ato miaraka amina tetezamita iray alina. Amin'ny farany, ny sampana dia hisaraka be loatra ka ho isan-karazany ny hazo ... Na eo aza izany, very amin'ny fanafohezana maro be aho sy ny fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny disto.
Fanjohian-kevitra lehibe. Heveriko fa mizara fialam-boly nilaozako izahay, Amateur Radio.
Momba ny tontolon'ny GNU / Linux, mitovy ny eritreritro. Ny toetran'ny Free Software dia toy izany, saingy tsy haiko hoe aiza no misy fisarahana be dia be hitondra antsika. Amin'izany lafiny izany dia mpandala ny nentin-drazana aho, tsy midika akory izany fa manohitra tetik'asa vaovao aho, saingy tsy entin'ny tosika na ny zava-baovao izay mitovy sy mitovy aminy mihitsy.
Heveriko fa ny GNU / Linux dia efa manolotra safidy hafa a la carte. Ny fizarazarana hatrany dia tsy tsara, lohahevitra mendrika ny hodinihintsika ...
73 avy eo !!
Manaiky mafy anao. Tsy misy fanampiny manampy 😉
Baron_Ashler dia hoy izy:
Raha vao jerena dia toa kanto, ny olana dia ny fametrahana azy amin'ny Netbook na tsy fitaovana maoderina loatra raha toa ka miadana ny gnome 🙁
Mamaly an'i Baron_Ashler
Napetrako tamin'ny netbook hp mini 110 ary ny zazavaviko kely Acer ONE AD250. Amin'ny zavatra azoko lazaina aminao, dia tena mandaitra izy io.
Ny tsiro dia tsiro
TIA GNOME !!!
Ary eto daholo ny olona maneho hevitra amin'ny birao tonga lafatra rehefa tsy afa-miala amin'izy ireo ny zava-dehibe: Miova ny fampiharana. Farafaharatsiny mba tiako hampiasa ilay mpilalao sy ilay mpijery sary.
Etsy an-danin'izany, ity no hany ary farany hahitanao ahy maneho hevitra avy amin'ny Windows.
Aza mitsangana ry lehilahy heh heh Ataoko izany indraindray, miankina amin'ny masinina misy ahy, ary tsy mbola nisy olona nilaza tamiko na inona na inona.
Enga anie…. 😉
isan'andro dia tiako kokoa ny gnome shell 🙂
Amin'ny maha-mpampiasa henjana KDE ahy, dia gnomizing kely miaraka amin'i Fedora aho, ary fantatro ny filôzôfian'izy ireo minimalist, izay ezahin'ireo bandy gnome hatao. Ny marina dia eo akaikin'ny birao tonga lafatra amin'izay azonao.
Tsy fantatro raha ny birao tonga lafatra, fa amin'ny maha mpampiasa ahy KDE SC nandritra ny fotoana ela dia malahelo ny fahatsorana amin'ny fampiasana ireo tontolon'ny GNOME izay avo indrindra amin'ny OS fototra aho.
Na izany aza, rehefa miasa amin'ny rindranasa GNOME / Xfce aho - manana Celeron manana 1GB mihazakazaka fampiharana Xfce + GNOME aho) - mahatsiaro ho voafetra sy h / claustrophobic aho rehefa zatra ny herin'ny fampiharana KDE SC 😛
Marina indrindra, zavatra mitovy amiko ihany no mahazo ahy, fa ny tena endriny kosa dia hafa tanteraka, na dia tontolo iraisana aza, Malahelo ahy ilay famolavolana maoderina tena izy, na dia tsy ampitahako amin'ny takelaka na finday avo lenta aza izany. Saingy faly tokoa isika fa tsy maintsy manaiky ny zava-misy tsotra hoe FANJAKANA KDE!
Azoko tsara ny birao tonga lafatra ho iray izay tsy manelingelina, tsy hitanao fa eo izy, ary i Gnome Shell no mahatratra azy.
Efa ela aho no niandry ny fanovana ny paradigma "birao nentim-paharazana", ary tonga hanome ahy ny fahatsorana tadiaviko i Gnome Shell tamin'ny farany.
Ary aza adino izany 😉
Very ahy taloha i Gnome… ka ny zavatra ataon'izy ireo dia tsy dia raisiko.
Tsy hitako hoe akorandriaka gnome birao 3 tsara.
Raha tokony kanelina, dia tsy maintsy mampifantoka ny gnome amin'ity akorandriaka ity ianao. Tena ahazoana aina, tsotra.
Na amin'ny endriny beta, noheveriko fa tsara.
Fa manomboka amin'ny gnome ka hatramin'ny KDE dia ambony ny kde.
Ny iray amin'ireo zavatra tsy tiako momba ny gnome dia ny nautilus, afaka mampiasa feso ianao, saingy tsy mitovy ny miasa amin'ny birao misy anao.
Tiako io 😀 😀 😀
Fotoana handevenana ny foto-kevitry ny bara farany ambany ao amin'ny birao, tsy maintsy mandroso fotsiny ianao!
Tiako ny Ubuntu miaraka amin'ny gnome 2.x mandra-pivadihan'izy ireo amin'ny Unity sy GS 3.x ary nandeha tany xubuntu aho ary faly tamin'ny safidy, nanapa-kevitra ny hanome ny firaisankina sy ny GS aho, fehiny tiako ny Unity (tsy namono tena aho fa tiako izy ary miova haingana), hafahafa ny GS, niadana ary nianjera, avy eo tonga ny kinova 12.04 ary ny firaisankina dia nanome ahy Crash bebe kokoa noho ny windows nandritra ny androm-piainako, ny hadisoan'ny compiz (intel ny grafiko), fehiny nandeha tany amin'ny Xubuntu 12.10 ary sambatra hatreto toy ny akoho amina fety kankana, Satria Xubuntu noho ny fonosany, satria XFCE satria milamina, haingana ary ny hatsarana tsara indrindra ananany tato ho ato.
k1000 dia hoy izy:
Angamba tsy ilay birao tonga lafatra fa saika XD.
Farafaharatsiny izy io no tena ahazoako aina ary ny hany fanitarana hafa ananako ao amin'ny tracker sy ny menio fanidiana. Ankoatry ny maivana kokoa noho ny kde sy ny firaisankina
Valiny amin'ny k1000
Ny marina dia tiako ny gnome, satria nividy kahie vaovao aho dia afaka nandramana tsara tamin'ny farany ny KDE, saingy mbola malahelo ny tontolo iainana kely aho.
Na izany aza, ny zavatra tiako momba ny KDE dia ny fampiasana azy mora kokoa. Tena tadiaviko ny fampiharana Gnome tsara hifehezana ny kitapo pc (toy ny touchpad kcm) sy ny takelaka volotsako toy ny ataon'ny tontolo "vaovao" misy ahy.
Inkilino dia hoy izy:
Heveriko fa ny PC dia voaozona ho lasa finday avo lenta roa metatra ... ary, tohizantsika hatrany ny fallback mandra-pialany antsika.
PS: Ilay zavatra misy azy ireo, maro loko sy tsara tarehy eny
Valiny amin'i Inkilino
Eny, faly aho miaraka amin'i Gnome ao amin'ny Arch Linux ... tsy fantatro ny antony mahatonga izany radika izany: "Tsy tiako ... tsy mandeha io."
Fa mbola ratsy kokoa aza, ny fankahalantsika ny tontolo birao iray ho faty tsotra izao satria tsy afaka mihazakazaka am-pahamendrehana azy ireo solosainantsika 90 taona lasa.
Tsy mampiasa KDE tsotra fotsiny aho satria tsy tiako izany, saingy hitako fa mahatalanjona izany sy ny zavatra hafa rehetra.
Tsy tianao ny Gnome ... tsara, ampitao izy, period, fa misy safidy hafa.
Tsy tiako mihitsy ny gnome, ny olana manelingelina ahy bebe kokoa dia ny tsy fitovizan'ny gtk3 sy ny fampiharana qt toy ny tamin'ny nampiasantsika ny tontolon'ny gtk2, ny zavatra hafa dia miadana be ny mutter raha oharina amin'ny kwin ary izy tsy manana foibe fanaraha-maso hanatsarana ny zava-bita.
nol dia hoy izy:
Eny, ny tena marina dia tena tiako ilay akorandriaka gnome, tsapako fa mandeha tsara izany, angamba resaka "fahazarana" ny endriny vaovao fotsiny.
Mamaly an'i nol
Ny "fahotan'i" Gnome dia ny naka ny dingana notadiavin'ny hafa fa tsy sahy.
Aza adino fa ny tontolon'ny Desktop tsirairay dia safidy manokana fa tsy fenitra ho an'ny rehetra.
Eny, mino tanteraka aho fa efa nisy ny zava-nitranga, ho fanandramana .. Izany hoe ny hevitra voalohany dia iray, saingy rehefa nandeha ny fotoana dia tsapan'izy ireo fa misy tsaratsara kokoa mety hipoitra ary nohatsarain'izy ireo izany .. izay antsoina hoe lozabe 😀
Heveriko fa ny fitsikerana an'i Gnome dia avy amin'ireo izay te-hanohy hiasa amin'ny fomba nentim-paharazana (zavatra iray, etsy ankilany, mitombina tanteraka). Fa ny manome lanja an'i Gnome ankoatry ny fampiasana azy mandritra ny volana vitsivitsy dia tsy maintsy ataonao amin'ny fomba fijerin'ny fanovana izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mila mivoatra ny birao, tsy maintsy miova izy…. satria niova ny mpampiasa ny haitao, satria miova ny fitaovana, satria miova ny fomba fifandraisana amin'ny masinina…. Ny fomba sasany dia tsy manilika ny hafa, fa raha ny fijerin'ny fanovana dia toa ahy Gnome no mahay indrindra… ambonin'ireo distro hafa sy ambonin'ny Windows na MacOS raha maika ahy ianao.
Zavatra iray hafa…. Mampiasa Ubuntu Gnome Shell Remix 12.10 (gUbuntu)… .. saingy vao omaly aho mbola tsy sahy nametraka ilay Nautilus vaovao (antsoina hoe Files izao). Ary tiako. Niova ny toe-javatra fa tiako izany. Manana bibikely manelingelina izy io, saingy tiako izany. Ankehitriny dia manandrana mijery ny fomba fametrahana ireo rindranasa vaovao aho (Mozika, Sary, Dosumnetos, sns). Misy mahalala ve raha efa misy? Iza ny anaran'ireo fonosana?
Mba hanovana ny fonosana Gnome 3.6 rehetra dia tsy maintsy apetrakao ny Gnome Team ppa miandraikitra an'i Remix. Azavain'izy ireo tsara izany:
Zahao hoe aiza no misy azy hoe "inona no tsy tafiditra", ary avy eo tonga ireo rohy avy amin'ny pejy fandefasana hanisy ny PPA.
Misaotra anao. Hatreto aloha dia mandeha aho. Boxes sy Documents no hany azoko nampidirina, ankoatran'i Nautilus vaovao. Mieritreritra aho fa ny sisa amin'ireo rindranasa vaovao dia tsy maintsy miandry, hatramin'ny febroary, izay tokony hamotsorana ny Gnome 3.8.
Ahoana ny fomba hamoronana multiboot Live-USBs